सहकारी सहर केन्द्रित भए, सिद्धान्त अनुसार काम गरेनन् : डा. प्रकाश श्रेष्ठ - Arthatantra.com
सहकारी सहर केन्द्रित भए, सिद्धान्त अनुसार काम गरेनन् : डा. प्रकाश श्रेष्ठ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरु धेरै ठूला भएको र सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम नगरेको बताउनुभएको छ ।
सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा सहकारी विषयक अन्तकृया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सिद्धान्तत अनुसार सहकारी समुदाय केन्द्रित, सानो आफै नियमनमा बस्ने खालेका हुने भएपनि त्यसो हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । सहकारी संस्था ठूला हुने र शाखा खोल्न पाउने हो वा होइन भन्ने विषय सोचनिय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारी संस्था सहर केन्द्रित भएको र गरिबी न्यूूनिकरणमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारी बैंकले साना सहकारीलाई सहयोग गर्छ की गदैन, ठूला सहकारीलाई रिसोर्स दिन्छ की सानालाई पनि दिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई बजेटले महत्वपूूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा लिएको बताउनुभएको छ । उहाँले सहकारी संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेपनि सहकारी संस्था छरिएर रहेकोले लक्षित समूहमा नपुुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीबाट जाँदा उद्देश्य अनुसार तलसम्म पुुग्न नसकिने जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा २९ हजार सहकारी संस्थाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने हो भने देश समृद्धिमा जान सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘सबै सहकारी संस्थाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने हो भने देशलाई कता लैजाने हो भन्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुुभयो ‘तर सहकारी उत्पादनमा लागेनन्, धेरै निष्कृय भए, सहकारी बढी भन्दा बढी उत्पादनमा लाग्न आवश्यक छ ।’
अघिल्लो लकडाउन खुलेपछि पछिल्लो ६, ७ महिनामा आयोत बढी भएको स्मरण गराउँदै सहकारी संस्था उत्पादनमा जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले अहिले दुुग्ध विकास संस्थाले धुुलो दुध बिक्री गर्न नसकेन गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो दुधलाई अब चकलेट बनाउन तर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वीजरल्यान्ड चकलेटमा चर्चीत भएको स्मरण गराउँदै नेपालले पनि त्यहाँबाटे केही सिक्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७८ जेठ १६ आइतवार १८:५२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे एकैदिन ६ हजार २०५ जनाले जिते कारोना
पछिल्लाे ओली सरकारको बजेटमा यस्तो छ सिएनआइको प्रतिकृया, ६.५ % को आर्थिक वृद्धि हासिल होला ?